Hammigii hormarineed ee loo hanweynaa hagaheedii mala hayaa? | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Hammigii hormarineed ee loo hanweynaa hagaheedii mala hayaa?
Hammigii hormarineed ee loo hanweynaa hagaheedii mala hayaa?
Qormadeeydaan ayaan jecleeystay in aad ilawadaagtaan oo aan ugu magac daray (Hammigii hormarineed ee loo hanweynaa hagaheedii mala hayaa?)
Marxaladda uu dalku marayo ayaa ahayd muddooyinkii lasoo dhaafay mid aad u adag iyadoo ay jirtay kala qeeybsanaan baahsan oo aad loogu kala aragti duwnaa .
Doorashadii Feb8dii ee loo doortay Madaxweynaha dowladda Federaalka Md Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa wajjahday moowjado aad u adag oo ay kamid tahay dabacsanaan xagga amniga caasimadda Muqdisho,Siyaasadda arimaha dibadda iyo xiriir xumada kala dhaxeeysa doowlad goboleedyada dalka.
Qodobka ugu horreeya ee aan jeclaan lahaa in aad ila wadaagtaan ayaa ah :-
“Dabacsanaanta xagga Amniga”
Magaalada Muqdisho oo ay Dowladda dhexe ku shaqeeyso ayaa waxay daris lanoqotay muddooyinkii ugu danbeeyay Qaraxyo,dilalka qorsheysan iyo baroor diiqyo aad usaameeyay dhammaan shacabka Soomaaliyeed.
Mushkiladda ugu weyn ee xagga amniga ayaa ahayd muddooyinkii danbe mid aad mooddo in uu faraha kasii baxayo ayaan wali loo hayn qorshe dhamaystiran oo jawaab unoqon kara amni xumada kajirta caasimadda dalka .
Muqdisho ayaa sanadihii lasoo dhaafay ahayd magaalo wehel u ah qaraxyada waloow ay bilihii lasoo dhaafay ay aad uga musiibo badnayd dhacdooyinkii kadhici jiray Muqdisho ,waxaa maalin kali ah ku dhimatay shacab boqollaal ah oo aan marna maankeena kabaxayn dhacdooyinkii14kii octobar iyo kii 28kii Octobar oo isagana dad aad ufara badan ay ku dhinteen halka dhaawacana aan wali tira sugan lahayn iydoo ay ahaayeen qaraxyadaasi kuwa is xig xigay haba ugu darnaatee dhacdadii 14ka Octobar .
Dilalka qorsheeysan ee ka dhaca Muqdisho ayaa daba soconayay qaraxyada iyadoo muddooyinkan xitta aan la carabaabin .
Doowladda Dhexe ayaan wali si rasmiya aanan u caddeeyn soona bandhigin halka looga soo duullaamo magaalada Muqdisho iyadoo taa bedelkeeda ka dhigtay baroor diiqyo aan horey loo arag iyo in ay ku dhawaaqdo in dalku xaalad dagaal uu ku jiro .
Madaxweyne Farmaajo ayaa muddooyinkii ugu danbeeyay ku dhaawayay in uu dalku galay xaalad dagaal waloow hadana mardanbe shaashadaha laga arkay isagoo dhahaya lagama adkaan karo argagixisada tasoo farxad galin karta cadawga marwaliba duullaanka ku ah shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Muqdisho.
~halkaa haynoo joogto qeeybtii koowaad .
~dhawaan ayaad ila wadaagi doontaan qaybaha xiga.
(Hammigii hormarineed ee loo hanweeynaa hagaheedii mala hayaa ?)
Mahadsanidiin Hassan Abdikadir Mudey